Galmudug oo xoog kusoo furatay gabar ajnabi ah oo kenya u dhalatay – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Nabad sugida ee maamulka Galmudug ayaa la sheegay iney xoog kusoo furteen gabar ajnabi ah oo ku afduubneyd deegaanka Camaara ee gobolka Mudug.
Haweeneyda lasoo badbaadiyay ayaa u dhalatay dalka Kenya, waxaana muddo badan ay gacanta ugu jirtay kooxaha burcad badeeda Soomaaliya, sida dadka deegaanka ay sheegayaan.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in ciidamada nabad sugida ay howlgal qorsheysan kusoo furteen haweeneyda u dhalatay dalka Kenya, inkastoo aan la sheegin magaceeda iyo waxay qabaneysay.
Ma jirin wax dagaal ah oo dhexmaray ciidamada maamulka Galmudug iyo kooxaha burcad badeeda ee gacanta ku hayay haweeneyda.
Howlgalka oo xalay dhacay, ayaanan la sheegin ciidamo aan Galmudug aheyn ka qeyb galeen, laakiin haweeneyda ayaa muddo badan ku afduubneyd gobolka Mudug.
Kooxa Burcad badeeda ayaa dhawaan madax furasho kusii daayay dad badan oo u afduubnaa kuwaasi oo dhalasho ahaan kasoo jeeday qaarada Aasiya.
Al-Shabaab oo la wareegay deegaanka Goof-gaduud ee duleedka Baydhabo
Puntland iyo Galmudug oo Gaalkacyo isku dhaafsaday Maxaabiis